Free expression is good for business — လွတ်လပ်သောထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကောင်းမွန်သည်။ – Free Expression Myanmar
Nov 20, 2017 by Coordinator	in News သတင်း
Freedom of expression creates an economic and policy environment of openness, transparency, government accountability, and responsible legal processes that are vital for doing good business.
Without free expression including media freedom, monopolies emerge, employees’ rights are abused, and corruption and malpractice become common.
In this week’s Frontier Myanmar, FEM raises our concerns about how Myanmar’s Contempt of Court Law can be used to hide legal disputes that can delay Myanmar’s big development projects.
Read more: https://frontiermyanmar.net/en/legal-dispute-ensnares-backers-of-myingyan-gas-power-project
ကောင်းမွန်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် အဓိကကျသည့် ပွင့်လင်းမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ အစိုးရတာဝန်ခံမှု နှင့် တာဝန်ရှိသော ဥပဒေ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ စီးပွားရေး နှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လွတ်လပ်သော ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းက ဖန်တီးပေးသည်။
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အပြင် လွတ်လပ်သော ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိလျှင် လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုများ ပေါ်ထွန်းလာပြီး၊ ဝန်ထမ်းတို့၏ အခွင့်အရေးများ ချိုးဖောက်ခြင်းခံကြရကာ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်းနှင့် အလွဲသုံးစားခြင်းအလေ့အထများက သမရိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်လာပေမည်။
ဒီအပတ်မှာ Frontier Myanmar နှင့် Free Expression Myanmar မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကြီးမားသော စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းများကို ကြန့်ကြာစေနိုင်သော ဥပဒေရေးရာ အငြင်းပွားမှုများကို ဖုံးကွယ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားရုံးများကို မထီမဲ့မြင်ပြုမှု ဥပဒေ ကို အသုံးပြုခြင်းအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိုးရိမ်မှုများကို တင်ပြထားသည်။
FEM campaign for legal reform
Read more about FEM's campaign for legal reform »
Tagged with: Business, Contempt of Court Law